सार्क प्याथोलोजिस्ट सम्मेलन राजधानीमा सुरु - Health Today Nepal
सार्क प्याथोलोजिस्ट सम्मेलन राजधानीमा सुरु
March 23rd, 2017 समाचार0comments
प्याथोलोजीका क्षेत्रमा सार्क राष्ट्रहरुमा भईरहेको विकास र साझा समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ क्लिनिकल प्याथोलोजिस्टहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ क्लिनिकल प्याथोलोजिस्ट अफ नेपालको आयोजनामा राजधानीमा बिहीबारदेखि सार्क प्योथोलोजिस्ट सम्मेलन सुरु भएको छ । तिन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सार्क राष्ट्र बाहेक निदरल्याण्ड र जापानका वरिष्ठ प्याथोलोजिस्टहरु सहभागी छन् ।
प्याथालोजीका क्षेत्रमा भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गरी विद्यमान समस्याको हल गरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ पहिलो पटक सार्क राष्ट्रका प्याथोलोजिस्ट सम्मेलन आयोजना गरिएको एसोसिएसन अफ क्लिनिकल प्योथोलोजिस्ट अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. गोपी अर्यालले बताए । उनले भने, यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य नै गुणस्तरीय प्याथोलोजी सेवा प्रदान गर्नका लागि आपसी अनुभव आदानप्रदान गर्नु हो । दुई सयभन्दा नेपाली र सयजना विदेशी प्याथोलोजिस्ट सहभागी भएको यो सम्मेलन नेपालको प्याथोलोजी क्षेत्रको इतिहासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट डा. केयूर गौतमले बताए । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्याथोलोजीका क्षेत्रमा भए गरेका आधुनिक प्रविधिका सम्बन्धमा एक सयभन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने डा. गौतमले जानकारी दिए । डा. अर्यालले भने, हामीले युरोप अमेरिकामा के भइरहेको भन्ने कुरा पढ्छौ । तर हाम्रै छिमेकी देशहरूमा प्याथोलोजी क्षेत्रमा कस्तो प्रविधिको विकास भइरहेको छ ? के के साझा समस्या छन् ? तिनको हल गर्न कति सम्भव छ ? जस्ता कुराहरूका विषयमा सम्मेलनमा व्यापक विचारविमर्श हुने छ ।
विज्ञहरुका अनुसार सार्क देशका जनताको जीवनशैली लगभग एउटै खालको छ । रोगहरूको संक्रमण पनि एकनासकै छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा भए गरेका प्रगति र अनुभवबाट एक अर्काले सिक्न जरुरी छ ।
नेपालमा करिब दुई सय ६० जना प्याथोलोजिस्ट छन् । यो संख्या त्यति न्यून होइन । यो क्षेत्रमा राम्रो भविष्य भएकाले अहिले प्याथोलोजी धेरैको रोजाइको विषय बन्ने गरेको छ । हामी जनशक्तिमा त्यति पछाडि छैनौं । तर प्रविधिका क्षेत्रमा अलि पछाडि नै छौं । अहिले पनि ठूलठूला अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूमा सुविधा सम्पन्न प्याथोलोजी छैनन् । भए पनि नाम मात्रका छन् ।
Previous article विश्व मिर्गौला दिवसमा ‘ किड्नी वाक ’
Next article प्याथोलोजिस्ट एसोसिएसनमा डा.शैलेश